ओली सरकारले किन प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेन ? – Maitri News
ओली सरकारले किन प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेन ?
maitrinews July 12, 2018
चुनावका बेला जनतालाई धेरै सपना बाँडियो तर अहिले काम हुन सकेन, सकारात्मक कामको लक्षणसमेत देखिएन । किन यसो भयो ? ओली सरकारको सचिवालय र मन्त्रीहरुले किन काम गर्न सकेनन् ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेर पनि किन काम गर्न सक्नु भएन ? स्थिर सरकार बनेपछि नेपालीहरुको जीवनस्तरमा सुधार आउने,मुलुकले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएकोमा सो कार्य हुन
किन हुन सकेन ? दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान ओली सरकार भाषणमुखी भयो जनमुखी हुन सकेन भन्ने आरोप छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि विकास, शान्ति र महंगी नियन्त्रण हुन सकेन । सरकारलाई दुई तिहाइको मात लागेको हो कि जस्तो भएको छ । जनताले सरकारमाथि औला ठड्याउन थालिसके । समयमै खबरदारी नगर्ने हो र चुप लागेर बस्ने हो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस कमजोर छ । संसद्मा उसको उपस्थिति न्यून छ जसले गर्दा सरकारलाई कडा दबाब दिन सक्ने हैसियतमा छैन । जसले गर्दा सरकारका काम कारबाही स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका छन् । भारत र चीनसित सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी नेपालको चौतर्फी विकासमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बेला हो यो । सरकार बनेको पाँच महिनामा जनताले राहातको अनुभव गर्न पाएनन् । सरकारले जनताको आवाज सुन्न छाडेको गुनासो गर्न थाले । काँग्रेसले सरकारको खबरदारी गर्न सकेन । कमजोर त्यान्दो समाएर सडक आन्दोलन गर्दै छ । नेवि संघ र तरुण दललाई सडकमा उतारेको काँग्रेसले केही गर्न सकेन । महंगी आकासिएको छ । बाढीपहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । भूकम्पपीडितहरुको बेहाल छ । देशका विभिन्न ठाउँमा डुवानको समस्या छ । भारतसित कुरा गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सो काम हुन सकेन ।
लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो तर सरकारले सार्वजनिक ठाउँलाई निषेध क्षेत्र घोषणा गरी विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । चिकित्सा शिक्षा सर्वशुलभ हुनुपर्ने माग गर्दै पटक पटक अनशन गरेका डा. गोविन्द केसीले काठमाडौँमा अनसन गर्न नपाएपछि कर्णालीको विकट जुम्ला जिल्लामा अनशन बसेका छन् । उनको अवस्था गम्भीर भइसक्दा पनि सरकार वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने तत्परता देखाएन । डा. केसीको अनशन औचित्यहीन भन्दै दम्भ देखाएको सरकारको यो रबैया लोकतान्त्रिक छैन । वार्ता गरी डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सो कार्य हुन नसक्दा डा. केसीको जीवन नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । केही चिकित्सा क्षेत्रका माफियाको पछाडि लागेर सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई महंगो बनाउँदै छ । नेपाली जनताका छोराछोरीले चिकित्सा शिक्षा पढ्न नसक्ने अवस्था बन्दै छ । डा. केसीको आन्दोलनलाई आम जनतासँग जोडिएको छ । डा. केसी आफ्नो स्वार्थका लागि अनशन बसेका होइनन् । उनका जायज माग सम्बोधन गरी चिकित्सा क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
ओली सरकारका पछिल्ला गतिविधिले जनतामा निराशा छाउन थालेको छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा केबल नारामा सीमित हुँदैछ । सरकारका काम कारबाही भाषणमुखी भए । भाषण गरेर नथाक्ने ओली सरकारका मन्त्रीहरुले जनताले देख्ने गरी जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालेको कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न सकेको देखिएन । जनताले शान्ति सुरक्षा ,महंगी नियन्त्रण, विकास र समृद्धि चाहेका छन् । जनताको चाहना अनुसार सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न नसक्नु , सरकारको चरित्र लोकतान्त्रिक बन्न नसक्नुले जनताका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो भएको छ ।
पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेका सबै खाले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर विपक्षी काँग्रेससित जोरी खोजेको ओली सरकारलाई काँग्रेसले पनि गतिलो जबाफ र दबाब दिन सकेन । विपक्षीसित सहकार्य गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य विर्सेर विपक्षीलाई पेलेर जाने नीति लिएको ओली सरकारको सचिवालय र ओली सरकारका मन्त्रीहरुले पटक्कै राम्रो काम गर्न सकेनन् । सरकारले सोचेर समयमै आफूलाई सच्याउन सकेन र जनतालाई बाँडेका चुनावी सपना पूरा गर्ने दिशामा काम नगर्ने हो भने सरकार नै असफल हुने खतरा बढ्दै छ ।
सरकारले देशको अन्य ठाउँको त कुरै छाडौँ राजधानी काठमाडौँ उपत्यकालाईसमेत न्युनतम व्यवस्थित गर्न सकेन । राजधानी नै अस्तव्यस्त छ । पानी पर्दा हिलाम्मे र धाम लाग्दा धुलाम्मे सडकले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । खानेपानी र ढल निकासका उचित व्यवस्था भएन । केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन सकेन । जनताका लागि राम्रो काम गर्नुपर्नेमा सरकार आफै अलमलिएको छ । अब भाषण गरेर जनताले पत्याउँदैनन् । काम नगर्ने हो भने जनताले साथ दिँदैनन् भन्ने कुरालाई ओली सरकारले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ
पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको ओली सरकारले किन काम गर्न सकेन ? जनताले देखिने गरी काम गर्न नसक्नुमा दोषी को हो ? सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । दोषीलाई कारबाही नगर्ने र मुलुकलाई अस्तव्यस्त पार्ने माफियालाई काखी च्यापी अगाडि बढ्ने हो भने ओली सरकार असफल हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले रेल र पानीजहाजको सपना बाँडेरमात्र अब जनताले पत्याउने पक्षमा छैनन् । अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता सुशासन र शान्ति, महंगी नियन्त्रण,राहत र आधारभूत विकास निर्माण हो ।
सरकार अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो भनी विपक्षी काँग्रेसले आरोप लगाउन थाल्यो । सरकार अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढेको छैन,लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ । जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन चाहन्छ भन्नका लागि सरकारले आफूलाई समयमै सच्याउनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा हावी सिन्डिकेट हटाउनेतिर सरकार लाग्नुपर्यो होइन भने ओली सरकार आफ्नै कारणले असफल हुन्छ । लोकतान्त्रिक सरकार असफल भयो भने मुलुका लागि यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ ।
Previous Previous post: नेपाल राष्ट्रबैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक
Next Next post: पाँच पोखरीमा जिप दुर्घटना, ५ जनाको मृत्यु